Guddiyada Qoraxda Unugyada, Heerarka Cadceeda ee Kuleylka, Cabbirrada Yaryar ee Gudbinta Qorraxda - Amso
Amso Solar wuxuu ku takhasusay soo saarida unugyada cadceeda iyo baalayaasha cadceeda oo ay damaanad qaaday 25 sano oo dammaanad ah. Khadadkayaga soo-saarka qoraxda ayaa daboolaya taxanaha 5BB iyo 9BB, baaxadda korantada oo si ballaaran uga socota 5w ilaa 600w.
9BB 144 unugyada unugyada qoraxda dhamaan mono madow ...
9BB 144 unugyada unugyada qoraxda mono 430w
72 unug oo cabirkoodu yahay cabirka caadiga ah unugyada qoraxda madow ...
Qalabka yar-yar ee qoraxda ku shaqeeya oo loo yaqaan 'poly 20w'
Amso Solar Tiknoolajiyadda Co., Ltd. waa soo saaraha baalayaasha cadceedda ku shaqeeya oo la soo saaray 12 sano. Waxaan leenahay waaya-aragnimo buuxda labada adeeg ee OEM iyo ODM. Sanadihii la soo dhaafay, Waxaan dhisnay shirkado ciriiri ah oo leh noocyo badan iyo soo-saareyaasha tier one. Waxaan si rasmi ah loo aasaasey 2017 si aan u keenno sumadeena: Amso Solar. Warshaddeenu waxay kudhowdahay harada quruxda badan ee HongZe, taas oo ku taal Huaian, JiangSu, Shiinaha.